Raha misy fiara tratra mipetraka eo amin’ny tsy tokony hipetrahana dia asiana avy hatrany « taquet d’arrêt » ary omena taratasy fanasaziana mifandraika amin’izany. Roa herinandro nitondran’ny ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina, dia io fa tsy an-kitsitsy ny fampanarahan-dalàna hisian’ny firindrana. Fomba fiasa efa nisy tamin’ny fitondran’ny ben’ny tanàna teo aloha Lalao Ravalomanana io, saingy nandeha ny fanenjehana samihafa tamin’izany. Na ho ela na ho haingana anefa, dia tsy maintsy hirosoana ny fandaminana ny tanàna hialana amin’ny gaboraraka, ka ny hirariana dia hitohy ny fandraisana andraikitra tahaka izao. Natao hohajaina sy hotoavina rahateo ny lalàna. Io iaraha-mahita io, ohatra, ny voka-tsoan’ny fampanarahan-dalàna hoe: ny lanlana ho an’ny fiara, trottoir ho an’ny mpandeha an-tongotra, ny tsena ho an’ny mpivarotra,… dia io hita io fa mba misy fiantraikany kely amin’ny fisosan’ny fifamoivoizana. Zavatra efa tokony ho natao hatry ny ela izao, fa harahina fepetra miandalana mifandraika amin’ny fanapahan-kevitra (mésure d’accompagnement), toy ny fananganana tsena, toeram-piantsonana manara-penitra,… izay fanamby nataon’ny ben’ny tanàna vaovao tamin’ny propagandy rahateo.